तालिबानले काबुल कब्जा गर्ने निश्चित बनेपछि अमेरिकाले चाल्यो यस्तो कदम, अब अरु देश के गर्लान ? — Sanchar Kendra
तालिबानले काबुल कब्जा गर्ने निश्चित बनेपछि अमेरिकाले चाल्यो यस्तो कदम, अब अरु देश के गर्लान ?
काठमाडाै। । तालिबानले ढिलोचाँडो काबुल कब्जा गर्ने देखिएपछि आफ्ना कर्मचारीलाई संवेदनशील सबै कागजात र सामग्री नष्ट गर्न अमेरिकी राजदूतावासले निर्देशन दिएको छ। बेलायती समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार संवेदनशील कागजात र विद्युतीय सामाग्रीहरू जलाउने प्रयोजनका लागि राजदूतावासले उपकरणहरू उपलब्ध गराएको छ।
सन् २००१मा अमेरिकाको ट्वीन टावरमा आ क्रमण गर्ने ओसामाबिन लादेनलाई आश्रय दिने अफगानिस्तानको तालिबान सरकारविरूद्ध अमेरिकाले २० वर्षअघि सैन्य कारबाही सुरू गरेको थियो। सो कारबाहीले तालिबानलाई विस्थापित गरेको थियो।
अमेरिकी सेना अफगानिस्तान फर्किने भएपछि तालिबानले गाँउ, शहर हुँदै राजधानी काबुल कब्जा गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अमेरिकाले अगष्ट महिनाको अन्तिम सम्ममा सबै अमेरिकी सेना फर्काउने तालिका बनाएको छ। शुक्रबार सम्ममा तालिबानले अफगानिस्तान दुई प्रमुख सहर दक्षिणको कान्दहार र पश्चिमको हेरात पनि कब्जा गरिसकेका छन्।
तालिबानले ढिलोचाँडो काबुल पनि कब्जा गर्ने निश्चितजस्तै बनेको छ। २० वर्षसम्म अफगानिस्तानमा बस्दा अमेरिकाले कैयन संवेदनशील काम र निर्णयहरू गरेको छ। तालिबानसँग लड्न अफगान सेनालाई सक्षम बनाउन मात्रै अमेरिकाले ८६ अर्ब डलर लागानी गरेको थियो।
सो लगानी बालुवामा पानी हालेसरह देखिएको छ। हजारौं अफगानी नागरिकले अमेरिकी सरकारलाई सुराकीका रुपमा र अन्य हिसाबले सघाएका छन्। कुनै पनि यस्ता संवेदनशील सूचना तालिबानको हात नलागोस् भनेर अमेरिका सचेत देखिएको छ। त्यसैकारण राजदूतावासले त्यस्ता सूचना भएका कागजात र सूचना आदन-प्रदान गर्न प्रयोग भएका विद्युतीय उपकरण नष्ट गर्ने प्रक्रिया सुरू गरेको छ।
अमेरीकाले आफ्ना नागरिक र आफूलाई नजिकबाट सहयोग गर्ने करिब चार हजार अफगान नागरिकलाई सुरक्षित रुपले देशबाहिर लैजान दिनरात काम गरिरहेको छ। आफ्ना नागरिकलाई अमेरिका फिर्ता लैजान तीन हजार सैनिक काबुलमा उतारेको छ।
यो उपलब्धिलाई तालिबानले अफगानी जनताले आफूहरूलाई स्वीकारेको संकेतका रूपमा लिएको समूहका प्रवक्ता क्वारी युसी अह्मादीले अल्जजिरा टिभीलाई बताएका छन्। हेरातका प्रदेश काउन्सिल सदस्य गुलाम हबिबका अनुसार हेरात अहिले भूत सहरजस्तो बनेको छ। करिब छ लाख मान्छे इरानको सीमामा गएर बसेका छन्।
हबिबको भनाइ उद्धृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ, ‘धेरै परिवारले सहर छाडेका छन्, अरू धेरै लुकेर बसेका छन्। यो भूताहा सहरजस्तो भएको छ।’ कन्दहारमा पनि गत राति भीषण द्वन्द्व भएको त्यहाँका सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार पछि तालिबानीहरूले सहर कब्जा गर्न सफल भए।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नेड प्राइसले भने दूतावास अझै बन्द नगरिएको बताएका छन्। यद्यपि कहिलेसम्म खुला रहन्छ भन्नेबारे ग्यारेन्टी दिन नसकेको रोयटर्सले जनाएको छ। बेलायतले पनि आफ्ना नागरिकको मद्दतका लागि ६०० सेना पठाउने तयारी गरेको छ। सैनिक टोली यो साताको अन्तिममा पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
यसमा चिकित्सक र विशेषज्ञहरू समेत रहनेछन्। ‘हामी गृहयुद्धतर्फ बढिरहेका छौं जस्तो लागेको छ,’ बेलायती रक्षामन्त्री बेन वालासले बिबिसीलाई भनेका छन्। अमेरिका र बेलायतसँगै जर्मनीले पनि आफ्ना नागरिकलाई आफगानिस्तान तुरुन्तै छाड्न आग्रह गरेको छ।
तालिबानी लडाकूले हेरातलाई नियन्त्रणमा लिएपछि एउटा भिडिओ सार्वजनिक गर्‍यो। ‘तपाईंहरू देख्न सक्नुहुन्छ, अहिले हामी हेरात प्रहरी हेडक्वार्टरमा छौं,’ ती लडाकूले भनेका थिए। गत बिहीबार मात्रै तालिबानले घज्नी सहर पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो। यो सहर कन्दहारदेखि काबुल जाने सडकमा पर्छ।
अहिले अफगानिस्तानभर फोन सम्पर्क बन्द छ। यसले कुन कुन सहर तालिबानको आक्रमणमा रहेको भन्ने जानकारी आउन सकेको छैन। कतिपय विश्लेषकले विदेशी सेना फर्किएको छ महिनाभित्रै असरफ घानीको सरकार ढल्ने विश्लेषण गरेका छन्। गाउँमा कब्जा जमाएको तालिबानले विस्तारै सहरमा आक्रमण गर्ने र युद्धबाट अहिलेको शासन व्यवस्था फाल्ने सम्भावना उनीहरूले औंल्याएका छन्।
तालिबानहरूले कसरी स्रोत जुटाउँछन् भन्ने प्रस्ट छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघको नियमनअनुसार उनीहरूको वार्षिक आम्दानी तीस करोडदेखि साढे एक अर्ब डलरसम्म छ।उनीहरूले लागुऔषधको व्यापार, लुटपाट, आफूले नियन्त्रणमा लिएका क्षेत्रमा कर लगाएर पैसा जम्मा गर्छन्। पाकिस्तान, इरान र रूसमाथि तालिबानलाई सघाएको आरोप छ तर ती देशले उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
ह तियार र अन्य स्रोतमा पनि तालिबानभन्दा अफगान सुरक्षाकर्मी निकै अघि छन्। अफगान सुरक्षा फौजलाई बलियो बनाउन अमेरिकाले अर्बौं डलर खर्च गरेको छ। अफगान फौजसँग पश्चिमा मुलुकमा बनेका अत्याधुनिक हतियार छन्, नाइट भिजन गगल्स, बख्तरबन्द गाडी, आर्टिलरी र साना ड्रोनहरू छन्। तालिबानले कहिल्यै बनाउन नसक्ने हवाई फौज पनि सरकारसँग छ। अफगानिस्तान सुरक्षा फौजसँग अहिले १६७ वटा जहाज र हेलिकप्टर छन्।
बीस वर्षसम्म तालिबान बिनाको अफगानिस्तानमा बाँचेका अफगानहरूलाई तालिबानी अतिवाद मन परेको छैन। अहिले नै आफूले नियन्त्रणमा लिएका ठाउँमा तालिबानले महिलाहरूले पुरूष सहयोगीबिना बजार नजान र किशोरीहरूलाई स्कुल नपठाउन उर्दी जारी गरिसकेको छ।
सरिया कानुनअनुसार शासन चलाउने तालिबानले अबका केही महिना सत्ता कब्जा गर्न आक्रमणलाई तीव्रता दिने निश्चित छ। (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)